Aqalka Congress-ka oo ogolaaday badhitaageerka miisaaniyadda Maraykanka - BBC News Somali
Aqalka Congress-ka oo ogolaaday badhitaageerka miisaaniyadda Maraykanka
17 Oktoobar 2013
Image caption Obama iyo dooddii miisaaniyadda
Ka dib markii madaxa la iskula jirey muddo toddobaadyo ah ayaa aakhirkii la gaadhay waanwaan golahayaasha Congress-ka iyo Senate-ka iyo dhinaca kale codsigii dawladda Maraykanka ee ahaa in la kordhiyo heerka deynta si loo badhitaageero miisaaniyadda.
Golayaashu waxay haatan ogolaadeen in la kordhiyo heerka deynta ee ay dawladdu qaadan karto o ahaa ilaa $16.7 trillion oo dollar. Guud ahaan qiyaasta loo baahnaanayo waxa lagu tilmaamaa ilaa $17.5 trillion. Muwaafaqadani waxay dhacday toddobaadyo ka bacdi dood dheer oo keentay xayiraad oo u dhaxaysa golayaasha ay u badan yihiin xisbiga muxaafadka ah ee Republican-ka oo ka soo horjeeda qorshaha dawladda iyo dhinaca kale dawladda madaxweyne Barak Obama iyo mudanayaasha xisbiga Democrts-ka ee golayaasha Maraykanka.
Image caption Congress-ka heshiiskii ka bacdi
Muwaafaqadanna waxa la gaadhay saacado kooban ka hor waqtigii kama-danbaysta ahaa ee la qabtay. Waxana aakhirkii waanwaantan ogolaaday Golaha Congress-ka ilaa 285 mudane, halka 144 ay diideen.
Heshiiskani waxa uu ka badbaadiyey dawladda Maraykanka dhaqaale burbur ku dhici lahaa qorshihii miisaaniyaddeeda oo wasaarado iyo waaxyo badan oo ku tiirsan miisaaniyaddaasi ay qarka u saarnaayeen inay xidhmaan. Laakiin ilaa hadda waxa la xaddidey waqtiga loo ogolaanayo inay sii socoto deyntan lagu kaabayo miisaaniyadda oo ku eg ilaa bisha Februry.
Waxa la filayaa in haatan dib loo furo waaxyo iyo wasaarado badan oo ay shaqeeyaan, shaqaale badanna ay ku soo noqdaan shaqadii hore looga joojiyey.Waxa kale oo soo dhaweeyey heshiiskan dadweynihii ku tiirsanaa adeegyada iyo taakulaynta miisaaniyadda dawladda, oo ay ka mid yihiin dadka shaqada la' iyo qawmiyadaha ajanebiga iyo qaxootiga ah ee ay ka mid yihiin Soomaalidu.
Madaxwyne Obama waxa uu subaxnnimadii hore ee Khamiista saxiixay qodobadani lagu heshiiyey oo noqon doona sharci. Hasse ahaatee khubarado waxay rumaysan yihiin in muwaafaqadan imiku ay tahay xal ku-meel-gaadh ah, laakiin aanayna ahayn mid wax ka wada qabanaysa dhibaatooyinka miisaaniyadda dalkaasi Marayanka, taasi oo loo baahan yahay in loo helo xal kama-danbays ah.
Halkan kala soco heerarka deyn-qaadashada dalalka adduunka iyo hoos u dhaca dhaqaale:
Image caption Heerarka deyn-qaadashada dalalka adduunka
Image caption Heerarka hoos-u-dhaca dhaqaalaha
Image caption Isugeyn deymanka dal kasta ee adduunka